भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ९३ करोड २० लाख « News24 : Premium News Channel
भक्तपुर नगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ९३ करोड २० लाख
भक्तपुर। भक्तपुर नगरपालिकाको दशौं नगरसभाको बैठकमा उपप्रमुख रजनी जोशीले भक्तपुर नगरपालिकाको आ.व. २०७८÷७९ को अनुमानित आय—व्यय बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको नगर सभामा नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान रकम साथै ऋण सापटी र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतसमेत गरी आ.व. २०७८÷७९ को लागि रु १ अर्ब ९३ करोड २० लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
विनियोजित बजेटमा चालु खर्चतर्फ रु. १ अर्ब १० करोड २२ लाख १७ हजार रुपैयाँ (५७.०५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ रु. ८२ करोड ९७ लाख (४२.९४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ ।
वक्तव्यमा ख्वपः अस्पतालको भवन यसै आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम पूरा गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै ख्वप अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न ३ करोड विनियोजन गरेको छ ।
बजेटमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोगको महामारीको प्रतिकूल अवस्थाका कारण नगरपालिकाले प्रक्षेपण गरे अनुरुप कर अनुमान गरेको भन्दा कम मात्र उठेको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा मितव्ययीता अपनाई यस आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरेको उल्लेख छ । साथै कोभिड महामारीको कारण स्थानीय पर्यटन ब्यवसायमा नकारात्मक असर परेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी आ.ब. २०७८।०७९ को शुरु ४ महिनाको व्यवसाय कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
क्यान्सर, मुटु, मृगौला तथा मस्तिष्कघात जस्ता कडा तथा दीर्घरोग भएका नगरवासी विरामीहरूलाई प्रतिव्यक्ति रु. १०,०००।– का दरले सहयोग गर्दै आएकोमा आ.व. २०७८÷७९ मा पाँच किसिमको दीर्घरोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला तथा मस्तिष्कघात तथा स्पाइनल इन्ज्युरी भएका रोगीहरूलाई प्रति बिरामीलाई रु. ५,००० वृद्धि गरी अबदेखि रु. १५,००० दिने भएको छ ।
विनियोजित बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १६.३२ प्रतिशत छ्ट्याएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा १३.५६ प्रतिशत, सम्पदा संरक्षण तथाविकास निर्माणमा २.७३ प्रतिशत, नवनिर्माण तथा पुनःनिर्माणमा २०.७० प्रतिशत, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा ४.०४ प्रतिशत, महिला–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा १६.१४ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा २.४५ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा १.५२ प्रतिशत र नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि २१.९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले शैक्षिक ऋण वितरणको लागि रु.२ करोड छुट्याईएको छ । पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीहरूलाई मोहडाका लागि इँटा र काठमा लाग्ने खर्च र झिंगटीमा लाग्ने कूल लागत रकमको ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । वडास्तरका योजनाहरू संचालन गर्न विगत वर्षझैं आ.व. २०७८÷७९ मा पनि प्रतिवडा रु. ५० लाखको दरले जम्मा ५ करोड रुपैया र सडक बोर्ड अन्तर्गतका योजनाहरू सञ्चालन गर्न रु. १ करोड विनियोजन गरेको छ ।
नगरसभाको सोही बैठकमा उपप्रमुख जोशीले “भक्तपुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७८”, “भक्तपुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८” सभासमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभाले छलफलको लागि स्वीकृत गरेको छ । नगरसभाको अर्को बैठक असार १३ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्ने निर्णय गरेको छ ।